Ifektri Yebhodlela Leplastiki | I-China Abakhiqizi Bebhodlela Leplastiki, Abahlinzeki
Ibhodlela lepulasitiki ngotshani 500ml CY-7002
ILONGSTAR ibhodlela lepulasitiki elinotshani, lenziwe ngempahla ebangeni lokudla, ephephile futhi enempilo. Futhi kulula ukuyisebenzisa, cindezela nje ukuthi ivule; Idizayini yesibambo engasheleli ephindwe kabili, ilungele ukuthi ingane iyibambe, futhi ilungele ingane ukuthi ifunde ukuphuza; Futhi ngebhola lokuzwa, i-360 ° Roll ngokukhululeka, vumela ingane iphuze ilele; Ngamandla amakiwe, angalawula ukuthi uphuza kangakanani umntwana; Ngephethini enhle, ibukeka yinhle.
Ibhodlela lepulasitiki elinotshani 400ml CY-7003
ILONGSTAR ibhodlela lepulasitiki elinotshani, lenziwe ngempahla ebangeni lokudla, ephephile futhi enempilo. Futhi kulula ukuyisebenzisa, cindezela nje ukuthi ivule; Idizayini yokubamba kabili, ilungele ingane ukuyibamba, futhi ilungele ingane yokufunda ukuphuza; Futhi ngebhola lokuzwa, i-360 ° Roll ngokukhululeka, vumela ingane iphuze ilele; Ngamandla amakiwe, angalawula ukuthi uphuza kangakanani umntwana; Ngephethini enhle, ibukeka yinhle.
Ibhodlela lepulasitiki ngotshani 540ml CY-7005
ILONGSTAR ibhodlela lepulasitiki elinotshani, lenziwe ngempahla ebangeni lokudla, ephephile futhi enempilo. Nge-3D lid nephethini design, ibukeka inempilo futhi yinhle; Idizayini yesibambo engasheleli ephindwe kabili, ilungele ukuthi ingane iyibambe, futhi ilungele ingane ukuthi ifunde ukuphuza; Futhi ngebhola lokuzwa, i-360 ° Roll ngokukhululeka, vumela ingane iphuze ilele; Ngamandla amakiwe, angalawula ukuthi uphuza kangakanani umntwana; Futhi nge-flip lid enotshani, ilungele ingane ukuthi ifunde ukuphuza.
Ibhodlela lepulasitiki elinotshani 620ml CY-7006
ILONGSTAR ibhodlela lepulasitiki elinotshani, lenziwe ngempahla ebangeni lokudla, ephephile futhi enempilo. Nge-3D lid nephethini design, ibukeka inempilo futhi yinhle; Futhi ngebhola lokuzwa, i-360 ° Roll ngokukhululeka, vumela ingane iphuze ilele; Ngamandla amakiwe, angalawula ukuthi uphuza kangakanani umntwana; Futhi nge-flip lid enotshani, ilungele ingane ukuthi ifunde ukuphuza; Ngesisekelo se-PP, asisheleli; Ngomucu osusekayo, ulula ngaphandle.
Ibhodlela lepulasitiki elinotshani 290ml CY-7007
ILONGSTAR ibhodlela lepulasitiki elinotshani, lenziwe ngempahla ebangeni lokudla, ephephile futhi enempilo. Idizayini yesibambo engasheleli ephindwe kabili, ilungele ukuthi ingane iyibambe, futhi ilungele ingane ukuthi ifunde ukuphuza; Futhi ngebhola lokuzwa, i-360 ° Roll ngokukhululeka, vumela ingane iphuze ilele; Ngamandla amakiwe, angalawula ukuthi uphuza kangakanani umntwana; Futhi ngesivalo esislayida ngotshani, kufanelekile ukuthi ingane ifunde ukuphuza; Ngesisekelo se-PP, asisheleli; Ngephethini enhle, kubukeka kuhle ...
Ibhodlela lepulasitiki ngotshani 290ml CY-7001
ILONGSTAR ibhodlela lepulasitiki elinotshani, lenziwe ngempahla ebangeni lokudla, ephephile futhi enempilo. Futhi kulula ukuyisebenzisa, cindezela nje ukuthi ivule; Idizayini yokubamba kabili, ilungele ingane ukuyibamba, futhi ilungele ingane yokufunda ukuphuza; Futhi ngebhola lokuzwa, i-360 ° Roll ngokukhululeka, vumela ingane iphuze ilele; Ngephethini enhle, ibukeka yinhle.
Ibhodlela lepulasitiki 530ml CK-8053
ILONGSTAR ibhodlela lepulasitiki, lenziwe ngempahla ebangeni lokudla, ephephile futhi enempilo; Ngomklamo oyingqayizivele, uzizwa ukhululekile; Ngomklamo wezintambo, iyaphatheka, ilungele ukuphuma ngaphandle nokuhamba.
Ibhodlela lePlastiki 700ml (L) CK-8039
ILONGSTAR ibhodlela lepulasitiki, lenziwe ngempahla ebangeni lokudla, ephephile futhi enempilo; Ngomklamo oyingqayizivele, uzizwa ukhululekile; Ngomklamo wesibambo sokuphakamisa, uyaphatheka, ulungele ukuphuma ngaphandle nokuhamba.
Ibhodlela lePlastiki 550ml (S) CK-8027
ILONGSTAR ibhodlela lepulasitiki, lenziwe ngempahla ebangeni lokudla, ephephile futhi enempilo; Ngomklamo oyingqayizivele, uzizwa ukhululekile; Ngomklamo wokuphakamisa indandatho, iyaphatheka, ilungele ukuphuma ngaphandle nokuhamba.
Ibhodlela lepulasitiki i-1000ml (L) CK-8033
Ibhodlela lePlastiki 580ml (S) CK-8031
Ibhodlela lepulasitiki elinotshani 450ml (L) CK-8036
ILONGSTAR ibhodlela lepulasitiki elinotshani, lenziwe ngempahla ebangeni lokudla, ephephile futhi enempilo. Kulula ukuyivula, isandla esisodwa nje silungile; Ngomklamo wezintambo, iyaphatheka.